Angola: Mihiratra indray ny vola madinika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jolay 2010 2:52 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Deutsch, Français, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, English
Nampiditra vola madinika manana sanda 5 kwanzas teo ami'ny tsena ny Bankim-pirenen'i Angola (BNA) tamin'ny volana May lasa teo, mba hanampy ireo sandam-bola madinika 1, 2, 10 sy 50 kwanza izay mbola azo ampiasaina foana hatramin'izao.
1 Kwanza avy ao amin'ny blaogy Aerograma
Manazava ny antony ampidirana ity vola madinika ity eo amin'ny tsena ny mpanoratra ny blaogy After all I’m just a boy walking around [pt] :
Ny tanjona, mikasa ny hiaro ny mpanjifa izy ireo, eo amin'ny fanampiana azy ireo hanamarim-pototra ny fifanakalozam-bola sy hanena ny fatiantoky ny mpanjifa rehefa mandray famerim-bola izy ireo. Tamin'ny ora fisakafoanana atoandro teo zao, tafakatra 7.50 kwanzas ny vidin-tsakafo tokony naloako, dia nanalàna 2.50 kanzas izany satria mbola nananako an'io vola io zareo (na dia hoe tsy dia misy dikany aza io sandam-bola io, dia tafakatra vola be izy io rehefa miverimberina matetika ka ampifanampiana amin'ny teo aloha). Hitako hoe fomba iray tena mahomby mba hiarovana ireo vahoaka tena fadiranovana ao anatina firenena iray faran'izay mahantra izy io.
Niteraka fiahiahiana teo amin'ny mponina sasany ny fampiasana an'ireo vola madinika ireo. Raha ho an'ny gazety Jornal de Angola [gazetin'i Angola], “ho an'ny olona maro, ireo vola madinika ireo dia sakana iray, satria tsy mety mandray an'izy ireny ny mpitantana tranombarotra”. Nefa, na dia eo aza izany, maro ireo izay manaiky ny fampiasana an'ireny vola madinika ireny, manome soso-kevitra izy ireo hoe tokony azo ampiasaina tsara eny amin'ny tsena manara-dalàna sy eny amin'ny tsena malalaka izy ireny, noho ny “tsy fahaizana mikajy tsara ireny vola taratasy ambany sanda ” izay ampiasaina amin'izao fotoana izao ireny.
Nanoratra [pt] mikasika an'io indrindra i Afonso Loureiro tao anaty blaogy Aerograma:
Ilaina ny fampidirana ireo vola madinika vaovao ireo mba hialàna amin'ireny vola taratasy ambany sanda ireny, izay tsy maharitra ka vetivety kely dia tsy azo ampiasaina intsony. Satria miovaova tànana foana izy ireny isan'andro, ohatra: ny faharetan'ny vola taratasy 50 kwanza izao dia tokony ho roa volana eo ho eo fotsiny.
Vola taratasy avy any ivelany, sary nalain'i Danie VDM tao amin'ny Flickr, nahazoana alalana CC (Sary natambatambatra)
Nangalan'ny mpanankanto aingam-panahy mihintsy io resaka vola madinika io tao Angola, ohatra amin'izany i Manuel Guedes dos Santos Lima, izay namorona teny mirindra mifangaro vazivazy tao anatin'ny tononkalony “Kwanza” mikasika an'i Kwanza (ilay renirano lehibe indrindra ao Angola), sy ny vola fampiasan'ny firenana manana an'io anarana io ihany koa. Namoaka ny tononkalony tao anaty blaogy ilay mpanoratra ny MultiBlog ary nilaza izy hoe “ny vola tena fampiasan'i Angola dia ny dolara”.
Raha ny marina, ny governemanta Angoley dia miezaka tsikelikely ny manisy fetrany ny fampiasana ny vola miasa amin'izao fotoana izao izay manjaka eran'ny firenena dia tsy inona akory zany fa ny dolara, izay no antony nampidirana ireo vola madinika ireo. Nahita làlana nidirana teo amin'ny tsenam-pirenena ny sandam-bola Amerikana noho ny fikorontanana ara-politika sy ara-tafika izay mampijaly an'i Angola; efa ho 30 taona niainana tao anaty ady, disadisa teo amin'ny ankolafim-politika roa lehibe indrindra, Unita sy MPLA, izao ny firenena.
Manambara ny gazety O País [Ny firenena], fa mbola tsy nasiana fiheverana firy ny resaka fampiharana ny sandam-bola ampiasaina nohon’ ny fisian'ireo sandam-bola roa ireo eo amin'ny fiainana andavanandron'ny Angoley, ny fototry ny fampiasana azy izay miankina amin'ny fahazaran'ny mponina amin'ny ankapobeny, ary na dia teo aza ny torohevitry ny Ivontoeram-pirenena miaro ny Mpanjifa (INADEC, Instituto Nacional de Defesa do Consumidor), dia tsy mahagaga loatra raha somary sarotsarotra ny miova.
Ity lahatsoratra ity dia nadikan'i Kitty Garden.